iPhone က Android ထက် ပိုသာတယ့် အချက် (၇) ချက် -
Android ရော် iOS ပါ နှစ်အတော်ကြာ သုံးဆွဲလာ ပြီးတယ့်နောက် Android က ပိုကောင်းတာလား iOS က ပိုသာတာလား ဆိုတာ စဉ်းစား ရတာ အခက်ကြီး ဦးနှောက်ခြောက် စရာ ကြီးပါ။ သို့သော်လည်း iOS အနေနဲ့ သူ့နေရာနဲ့သူတော့ ပိုကောင်းနေတယ့် အချက်တွေ ရှိနေတယ် ဆိုတာ လည်း ငြင်းမရတယ့် အချက်ပါပဲ။
Android က ပိုသာတယ်လို့ ပြောရင်လည်း ဟုတ်နေတာပါပဲ ၊ Android က open source ဖြစ်တယ့် အတွက် ကိုယ်ဝယ်ထားတယ့် ဖုန်းကို ကို ပိုပြီး လုပ်ခြင်ရာ လုပ်လို့ရမယ်၊ ရွေးစရာ brand မျိုးစုံရှိမယ် ၊ လူတိုင်း အတွက် သင့်တယ့် တန်ဖိုးအလိုက် ဖုန်းတွေ အများကြီး ရှိမယ် ၊ ပြောရရင် မကုန် သလောက် နီးပါးပါပဲ။
ကဲ အဲ့သလောက် ကြီးတောင် ဆိုရင် Android က iOS ကို အဲ့လောက် အများကြီး အနိုင်ပိုင်း နေတာ iOS က ရှိဖို့တောင် သင့်သေးရဲ့လား? သူ့မှာလည်း သူ့နည်း သူ့ဟန် နဲ့တော့ ပိုကောင်းတယ့် အချက်တွေ ပြန်ပိုင်းစရာ အများကြီးရှိ နေပြန် ပါသေးတယ်။ အဲ့ထဲက နည်းနည်း လောက်ကို ဒီမှာ ပြောကြည့် ရအောင်လား
(1) iOS က သုံးရလွယ်ပါတယ်
“Less mean more, slow mean speed” ဆိုတယ့် စကားအတိုင်း တစ်ခါလေမှာ အားသာချက် တွေက အားနည်းချက်တွေ ဖြစ်လာ တတ်ပါတယ်။ Android မှာ Brand မျိုးစုံ ရှိနေတာ ကြောင့်ပဲ တစ်မျိုးနဲ့ တစ်မျိုးက သုံးရတယ့် ပုံစံခြင်း က ထင်သလောက် မတူပါဖူး။ သုံးမျိုး လောက်ကို လှည့်ကိုင် ဖူးတယ် ဆိုရင် ဒီအချက်ကို ကောင်းကောင်း နားလည် ပါလိမ့်မယ်။
Android ကို အသုံးပြုတယ့် Brand တွေက သူတို့အချင်းချင်း ကိုက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူအောင် ကြီုးစားပြီး ထုတ်နေကြ တာပါ။ Super Users တွေ ဖို့ အသီးသီးရဲ့ Basic functions တွေကို လိုက်ဖို့ ၁၅ မိနစ် မကြာနိုင် ပေမယ့် အချို့ သူတွေ အတွက်တော့ အခက်အခဲက ရှိနေတယ် လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ iOS မှာ တော့ ရှင်းပါတယ် ဖုန်းသုံးခြင်လား iPhone ရှိတယ် အပြားကြီး သုံးခြင်လား iPad ကို သုံး။
ဥပမာ-ကျွန်တော့် Father ၊ Android စကိုင် တုန်းက ဆိုရင် ၂ ရက် လုံးလုံး တစ်ခုခြင်းစီ ဖြေးဖြေး ခြင်း သင်ပေးရတယ် နောက်တော့ ၂-၃ ရက်နေမှ တစ်ခါ တစ်ခါ ပြန်ပြန် လာမေးတယ် အမြဲတမ်း ပဲပေါ့နော်။ iPhone6စကိုင်တော့ Fingerprint setup လုပ်တာနဲ့ Internet ပိတ်ဖွင့်ပဲ သင်ပေးရတယ် ကျန်တာ သူ့ဟာသူ လုပ်ကြည့်ရင်း အဆင်ပြေနေတယ် ၁၅ ရက် ၂၀ လောက် ကြာမှပဲ တစ်ခါ တစ်ခါ မေးတတ်တယ်။ Father က အရင်ဖုန်းလောက် ခေါင်းမကိုက်ရဖူးတယ့် ဗျ။
(2) Apple ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် “Ecosystem”
Apple ရဲ့ Ecosystem က ကောင်းတယ်လို့ ပြောတာထက် ပိုသိပ်သည်းမှု ရှိတယ်လို့ ပြောရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆို Android ￼ရဲ့ Ecosystem က မကောင်းဖူးလား ဆိုတော့ Good ပါ ဒါပေမယ့် not great 👍🏿 ပေါ့နော်။ ဘာကြောင့် ဆိုတော့ Android ဆိုပြီး Google တောင် ဖြောင့်ဖြောင့် မတ်မတ် သုံးမရတာ အသည်းပေါက် စရာကြီး၊ ဟိုဟာလုပ် ဒီဟာလုပ် ထည့်ရနဲ့။
Apple မှာ product တွေအများကြီးရဲ့ အချိက် အဆက်က လုံးဝကို သိပ်သည်းပြီး အသေ ပဲ၊ သူက ဘယ်သူ့အတွက် မှ နေရာပေး မဝင်ပါဖူး။ တစ်ဖက်မှာ Google အနေနဲ့ ကျတော့ အားလုံးကို လက်ခံထားပြီး ချိတ်ခြင်ရာ ချိတ် ဖြစ်ခြင်ရာ ဖြစ်ပါပဲ။ နောက်တစ်ခု Ecosystem မှာ အရေးပါတာက Apps တွေပဲ ပါပဲ။
Apple ရဲ့ App Store က ပိုသာတယ် လို့ ပြောတာ မဟုတ်ပေမယ့် သူ့မှာ ပိုကောင်းတယ့် ထိန်းသိမ်းမှုတွေ ရှိတယ်။ အသေဖြစ်နေတယ့် Ecosystem ပေါမှာ တိကျတယ့် စည်းမျဉ်း တွေနဲ့ Apps တွေကိုသာ ထားရှိတယ်။ Play Store အနေနဲ့ ခုနောက်ပိုင်းမှာ အရမ်းကို ကြိုးကြိုးစားစား ထိန်းသိမ်း လာပေမယ့် နည်းနည်း လေးတော့ ရှုပ်ပွ နေသေးတယ် Google အနေနဲ့ အချို့ နေရာတွေမှာ တင်းကျပ်မှု ပေးလိုက်ရင် Play Store ရဲ့ Ecosystem ကလည်း အရမ်းကို မိုက်သွားမှာပါ။
(3) iOS ရဲ့ သန့်စင်တယ့် Performance
iOS ရဲ့ Performance က ပိုသာတာလား ဆိုတော့ လက်ရှိတော့ မဟုတ်ဖူးပေါ့နော်၊ အခုက SD 865 က A13 ကို GPU ကလွဲလို့ အကုန် သာနေတယ့် အနေအထားပါ။ ဒီနေရာမှာ A13 က ရက် ၁၈၀ ကျော် ဟောင်းနေပြီ SD 865 က အခုမှ ထွက်တာ အသစ် ဘာညာ ဆိုတယ့် အချက်တွေ မပြောခြင်ဖူး ဘာပြောပြော 865 က ပိုသာတယ် ဒါပဲ မငြင်းနဲ့။
သိူ့ပေမယ့် Performance ဘယ်လောက် ကောင်းတယ် ဆိုတာ Speed တစ်ခု ထဲကိုပဲ မျက်ကန်း ကြည့်လို့ မရဖူး၊ ပိုသာလာတယ့် Performance ပေါမှာ OS နဲ့ Software ရဲ့ optimizations တွေ ဘယ်လောက် ကောင်းတယ် ဆိုတာ က အဓိက ဆုံးဖြတ် ပေးတယ် လို့ပဲ ထင်ပါတယ်။
Software & OS Optimizations တွေမှာ ဘယ်သူက ပိုသာသလဲ ဆိုတော့ iOS ပဲပေါ့။ သူ့မှာ တစ်ခုတည်းရှိတယ့် Hardware မှာ တိကျစွာ အလုပ်လုပ်မယ့် Software တွေ Apps တွေ ကိုသာ ထုတ်လုပ်ပေးမယ့် သူတွေပဲ ရှိနေတာက ဘယ်သူ နေနေ အဆင်ပြေအောင် လုပ်နေကြရတယ့် သူတွေ ထက်တော့ အသာကြီး ဖြစ်သွားရတယ့် အချက်ပါ။ Android ရဲ့ software apps တိုင်းက optimizations မကောင်းတာ မဟုတ်ဖူး ဆိုပေမယ့် အချို့ အချို့တွေကတော့ ညံ့ပါတယ်။
(4) iOS က smooth ဖြစ်ပါတယ်
iOS & Android နှစ်အတော့် အကြာကို သုံးကြည့်လာ သမျှ သတိထားမိ ဖို့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်လာတာ ကတော့ iOS ရဲ့ smooth ဖြစ်မှုကို ပါပဲ။ iPhone ကိုင်လာသမျှ ကြုံဖူးလာတာကတော့ App တစ်ခုမှာ အလုပ်ဆက် မလုပ်တော့ပဲ ရပ်သွားတယ်၊ ရပ်သွားတော့ multi tasking ခေါပြီး slide up လုပ် ရှင်းထုတ်ပြီး ပြန်ထွက် ဒါပဲပေါ့။
Android မှာတော့ ကြုံဖူးတာတွေက App တစ်ခုမှာ ရပ်သွားပြီ ဆိုရင် ထွက်လို့လည်း မရဖူး ဘာမှလည်း နှိပ်မရဖူး Freeze ကို ဖြစ်သွားတာ မျိုး၊ Unfortunately ပြတယ်၊ Restart/reboot ကျကျ သွားတယ်၊ shutdown ဖြစ်သွားပြီး နောက် နာရီ တော်တော်ကြာမှ ပြန်ဖွင့်လို့ ရတယ်။ ဒီတော့ Android မှာ သုံးရတာ ကြားဖြတ် နှောက်ယှက် ခံနေရတာ နည်းနည်းတော့ များတယ် iOS လောက် ချောချော မွေ့မွေ့ မဖြစ်ဖူး လို့ မြင်မိပါတယ်။
iOS မှာ Reboot ကျတယ် ဆိုတာက iOS Update အသစ်မှာ bugs ပါနေတာ မျိုးမှ ကြုံရတာ မျိုး ကျန်တယ့် အချိန်တွေမှာ မဖြစ်သလောက်ပဲ။ Super heavy user ဖြစ်တာနဲ့ အညီ Windows မှာ screen ပြာသွားသလိုမျိုး Android မှာ တကယ် heavy use တယ့် အချိန် Freeze ဖြစ်တာနဲ့ shutdown ကျတာတွေက တော်တော်လေး ခံရခက်ပါတယ်။
April လထဲကပဲ အသိစီက BS2Pro Ram 12, 855+ ငှါးကိုင် သေးတယ် တစ်ရက်နဲ့ နောက်နေ့ နေ့ဝက်မှာပဲ Reboot ကျသွားတယ် အဲ့ညကျ Freeze ပါ ထက်ဖြစ်တယ် ဒါပေမယ့် ကိုင်ရတာ တကယ် မိုက်ပါတယ် သုံးရတာလည်း အရမ်း သုံးပျော်ပါတယ်။
(5) iOS Users တွေရဲ့ Update သဘောထား
Update မှန်မှန် ရတာ, Update များများ ရတာ နဲ့ Update ကြာကြာ ရတာ ဆိုတယ့် အချက်တွေကို ကြည့်ရင်တော့ iOS က Android ထက် အများကြီးကို ပိုသာ ပါတယ်။ Google က သူ့ရဲ့ Pixel product တွေကို ဂရု တစ်စိုက်ရှိ ပေမယ့် Apple ရဲ့ Timely iOS Update ကို မယှဉ် နိုင်သေးဖူး ဆိုတာတော့ လက်ခံရမယ့် အချက်ပါ။
ကျန်တာကတော့ Samsung တစ်ခုပဲ Android update ပေါမှာ အလေးထားသလို ခံစားရတယ် ကျန်တယ့် သူတွေလည်း ပေးပါတယ် ဒါပေမယ့် သူတို့က Android ထက် သူတို့ ကိုယ်ပိုင် ကိုပဲ အလေးပေးတာ များတယ် ဒါ့ပြင် Updateless ဖြစ်နေတယ့် Android phones တွေနဲ့ တစ်နှစ်ကမှ ဖြစ်သွားတယ့် သူတွေလည်း ရှိနေတယ် ဆိုတာက Android အတွက် Update ဆိုတယ့် အခန်းမှာ သိပ် မျက်နှာ မလှခဲ့ရ ပါဖူး။
iOS Users တွေ အတွက် iOS Update ဆိုတာ အရာရာ ပါပဲ။ နိုင်နိုင် မနိုင်နိုင် သင့်သင့် မသင့်သင့် ချမှာပါပဲ၊ ၄ နှစ်လောက်ကတော့ Update က မျက်စီ မှိတ် ချလို့ရတယ့် အနေထား ပါ။ ၄ နှစ် နောက်ပိုင်းတော့ Update က ပေးနေပေမယ့် မတင်သင့်တော့ဖူး အဲ့အစား ဖုန်းသာ လဲကြပါတော့ လို့ ပြောခြင် မိတယ်။ ၃ နှစ်ပြည့်ရင် အရင်ဆုံး လဲသင့်တာက Battery ပါ။ ဖုန်းမလဲခြင်ရင်တောင် update ရပ်ပြီး battery လေးတော့ လဲသုံးကြပါ။
(6) iPhone ဝယ်ရ၊ ရောင်းရ လွယ်/တန် ပါ
iPhone ဝယ်ရတာ အရမ်း လွယ်ပါတယ်။ iPhone မှာ iPhone ပဲ ရှိလို့ပါ။ ထို့ပြင် သင်ဟာ iPhone5ပဲကိုင်ကိုင်7ပဲကိုင်ကိုင် 11 ပဲကိုင်ကိုင် အဲ့ နှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ခဲ့တယ့် iPhone ကို ကိုင်နေတယ် ဆိုတာ သင်လည်း သိတယ် ကျွန်တော်လည်း သိတယ် အားလုံးလည်း သိပါတယ်။ iPhone က iPhone ပါပဲ။
Second market ထဲမှာဆို ၁သိန်းခွဲလောက်ဆို 5s ကိုင်၊ ၃ သိန်းလောက်ဆို 6s,7 ကိုင်၊ ၄ သိန်းခွဲလောက်ဆို 8 ကိုင်၊ ၆ သိန်းလောက်ဆို X,XR ကိုင်၊ ၈ သိန်းလောက်ဆို Xs ကိုင်၊ ၁၀ သိန်းလောက်ဆို 11 ကိုင် ဒါပဲ ရွေးစရာ ရှိမှာပါ။ second ရမရ ကတော့ ကိုယ့်ကံ ပေါ့။
Market value မှာဆို iPhone တွေက ပြန်ရောင်းရတာ တန်ပါတယ်။ iPhone စျေးကွက်က ပျမ်းမျှ 15%-20%-25% ဆိုပြီး နှစ်စဉ် အငြိမ် ကျပေမယ့် Android စျေးကွက်ကတော့ 20/25%-25/30%-30/35% ကနေ ရံဖန်ရံခါ ၁၂ လရာသီ Promotions နဲ့ clear sale & discount တွေကြောင့် ၁ နှစ်ထဲ 50% ထိလည်း ကျတတ်ပါတယ်။
(7) Apple Support က ပြိုင်စံရှားပါ
Apple support ဘယ်လောက် ကောင်းတယ် ဆိုတာ Apple Support app ကို အသုံးပြုဖူးတာ နဲ့ပင် သိကြမှာပါ။ live chat တာဖြစ်စေ ဖုန်းခေါတာ ဖြစ်စေ ရမ်းတုတ်နေတယ့် အင်္ဂလိပ် စာနဲ့ ကိုယ့်ကို တကယ့်ကို နားလည်အောင် ကြိုးစားပေးပြီး စိတ်ရှည် လက်ရှည်နဲ့ အကောင်းဆုံး ဖြေကြားပေး နေပါတယ်။
App Store ကနေ app တွေမှားဝယ်တာ မျိုး ဝယ်ပြီး ကိုမှန်းထားသလို မဟုတ်ခဲ့တာ မျိူး ဆို ပြန်အမ်းခိုင်းလို့ လွယ်ပါတယ် refund link ကနေ ပြန်တောင်း လိုက်ရုံပါပဲ။ in game မှာ items တွေ purchase လုပ်ပြီး ရောက်မလာရင်လည်း ပြန်တောင်း ရတာ သိပ်လွယ်ကူ သလို ကိုယ်မသိလိုက်ပဲ ဖြတ်နေတယ့် subscriptions တွေ အတွက်လည်း ပြန်ပြီး ယူရတာ လွယ်ကူ ပါသေးတယ်။
တစ်နှစ်က ထိုင်းက သူတစ်ယောက် တစ်လ $၉ လောက်နဲ့ ၁၀ လကျော် subscription ဖြစ်နေပြီးမှ သိရတယ့်အခါ ပြန်တောင်းလို့ ရမယ့် နည်းလမ်းကို အကြံပေးခဲ့ ပါတယ်။ တစ်လ လောက်ကြာတော့ ၁၀ လစာ လုံးပြန် ရောက်လာတယ် ဆိုတယ့် သတင်း ကြားရတော့ Apple ရဲ့ Support ကို တကယ် လေးစား မိရပါတယ်။
Warranty နဲ့ ပတ်သက်ရင်လည်း Apple က တကယ်ကို အံ့အားသင့်စရာ တွေ လုပ်ပေး တတ်ပါတယ်။ တစ်ခါက iPhone အသစ် ဝယ်ယူရာ Warranty က ၁၁ လကျော်ကျော် လေးပဲ ပါပါတယ် ရက် ၂၀ ကျော်လိုနေ ပါတယ်။ ဆိုင်ကို ဆက်သွယ်လိုက်တော့ လိုအပ်တာ ပြန်တောင်းပြီး ၂ ရက်ပဲ စောင့်ပါလို့ ပြောပါတယ်။ ဆိုင်ဖက်က ရပါပြီး အကြောင်းကြတော့ Warranty စစ်ကြည့်ရာ အပြည့်ပြန် ဖြစ်သွားတာကို တွေ့ရတာ ဘဝမှာ ပထမဆုံး အကြိမ် ကြုံဖူး ခြင်းပါပဲ။
iPhone အလုံးမျိုးစွာ ဝယ်ယူ လာတာနဲ့ အမျှ Factory false နဲ့ လဲလာခဲ့တာ အကြိမ်ပေါင်း မနည်း အဆင်ပြေခဲ့ ဖူးပါတယ်။ တစ်ကြိမ်ကတော့ ဝယ်ပြီး ၂ ရက်လောက် ကြာတယ့် အခါမှာ shutdown ကျကျ သွားနေပြီး နောက်ရက်ကြာတော့ တစ်ရက်ထဲ ၂ ကြိမ်လောက် ကျလာပြီး ပါဝါ လုံးဝ သေသွား ပါတော့တယ်။ Warranty ပြန်ပို့ဖို့လည်း ၂ ပေလောက်က လွတ်ကျမိထားပြီး ထောင့်မှာ ချိုင့်နေတော့ စဉ်းစား ရအခက်ကြီးပါ။
ဒါနဲ့ ဆိုင်ကို ဆက်သွယ် လိုက်တော့ လာပြကြည့်ပါ ဆိုတော့ သွားပြပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်ကို မေးတော့ အသေးစိတ်ပြော ပြတယ် ဘယ်လောက်က ကျတာလည်း ဆိုတော့ ၂ ပေလောက်က ကျတယ်ပေါ့။ ဆိုင်ကပြန်ပြောတယ် iPhone က အဲ့လောက်က ကျရုံနဲ့ မပျက်ပါဖူး တယ့် Warranty ရပါတယ် ဆိုပြီး Singapore ကို ပြန်ပို့ပေးတယ့် အသစ်တစ်လုံး ပြန်လဲ ပေးလိုက်တယ်။ အဲ့ချိန်က ထင်မထားတာတွေ ဖြစ်တော့ အရမ်းကိုလည်း ပျော်ခဲ့ပါတယ်။
Admin ရဲ့ အတွေ့ကြုံနဲ့ ရှုထောင့်ကနေ iPhone က android ပေါ ပိုသာနေတယ် လို့ ထင်မိတယ့် အချက်လေး အချို့ကို ဖော်ပြ ပေးခဲ့တာပါ။ အမြင်ခြင်း တူခြင်မှလည်း တူပါမယ်။ ကိုယ်ပိုင် လက်ခံထားတယ့် နားလည်မှုပေါ မူတည်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အကြိုက်ခြင်း လည်း ကွဲနိုင်ပါတယ်။
Admin ကလည်း iOS Banker Myanmar ကဆိုတာထက် နည်းပညာ ချစ်သူ တစ်ယောက်ပါ။ နည်းပညာ ချစ်သူ တစ်ယောက် အနေနဲ့ နည်းပညာ Product တစ်ခုကို မဟုတ်မမှန် အတင်း ချိုးနှိမ်ပြီး မပြောပါဖူး။ တစ်ခု ခြင်းစီရဲ့ အားနည်းချက် အားသာချက် လေးတွေကို အချိုးကျကျ ရောဆက် ဖော်ပြသွားခြင်းကို နားလည်နိုင်မယ် လို့ မျှော်လင့် မိပါတယ်။
ပန်းသီးနဲ့ လိမ္မော်သီးကို ယှဉ်နေ မှတော့ တစ်ဦးပေါ တစ်ဦး ပိုကောင်း နေတယ့် အချက်တွေ ရှိနေ မှာ ဖြစ်ပြီး ဘယ်သူက ပိုသာတယ် ဆိုတာကတော့ စားတယ့်သူ လျှာကပဲ ဆုံးဖြတ် ပေးနိုင်ပါတယ်။ Admin ကတော့ နှစ်လုံး လုံးစားပါတယ် သင်ရော် ဘယ်တစ်လုံးကို ပို ခံတွင်း တွေ့လဲ ဗျ ? ဘာကြောင့် တွေ့တာလည်း ရှင်းပြ ပေးသွား ပါဦးနော် !
Next iPhones တွေအတွက် အကောင်းဆုံးသော Fast Chargers များ